Noocyada wasakhowga biyaha: sifooyinka iyo cawaaqibka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Wasakhowga biyuhu waa isbeddel kasta oo kiimiko, jidheed ama bayooloji ah oo ku yimaadda tayada biyaha kaas oo saamayn xun iyo waxyeello ku leh noolaha isticmaala. Fikradda biyaha wasakhaysan waxaa loola jeedaa ururinta iyo isku-ururinta hal ama in ka badan oo walax ah oo aan ahayn biyaha si la mid ah ilaa ay sababto isku dheelitir la'aanta nolosha noolaha, isticmaalka dadka, warshadaha, beeraha, kalluumeysiga iyo hawlaha madadaalada iyo arrimaha xoolaha. Way badan yihiin noocyada wasakhowga biyaha hadba halka uu ka yimid iyo khasaaraha uu geystay.
Haddaba, waxa aanu maqaalkan u huray in aanu idiinka warramo noocyada kala duwan ee wasakhowga biyaha ee jira iyo waxa ka dhalan kara.
1.2 Biyaha dushiisa
1.3 Nuugayaasha ogsijiinta
1.6 Wasakhaynta walax la hakiyay
2 Ilaha iyo noocyada wasakhowga biyaha
3 Noocyada wasakhowga
3.1 Microorganisms pathogenic
3.2 Qashinka dabiiciga ah
3.3 Kiimikooyinka aan organic ahayn
3.4 Nafaqeeyayaalka aan organic ahayn
3.5 Iskudhisyada dabiiciga ah
Saliida daata waxay had iyo jeer saameyn ku leedahay duurjoogta ama nolosha biyaha, Laakiin suurtogalnimada faafitaanku waa mid aad u weyn.
Saliiddu waxay ku dhegtaa baalasha shimbiraha badda, taasoo xaddidaysa awoodda dabaasha ama duulista, sidaas awgeedna waxay dishaa kalluunka. Saliida daadatay iyo daadinta maraakiibta ayaa horseeday wasakhowga badda. Xusuusin Muhiim ah: Saliida kuma milmi karto biyaha waxayna samayn doontaa lakab qaro weyn oo saliid ah oo biyaha ku jira, oo xiiqda kalluunka iyo xannibaadda iftiinka dhirta biyaha ee sawir-qaadista.
Biyaha dushiisa waxaa ka mid ah biyaha dabiiciga ah ee laga helo oogada dhulka, sida webiyada, harooyinka, balliyada, iyo badaha. Walxahaasi waxay la soo xiriiraan biyaha iyo ku milmi ama jidh ahaan isku qas.
Jirka biyaha waxaa ku jira microorganisms. Kuwaas waxaa ka mid ah noolaha aerobic iyo anaerobic.. Biyuhu inta badan waxa ay ka kooban yihiin noole yar-yar, ha ahaado aerobic ama anaerobic, taas oo ku xidhan maaddooyinka noole rogrogmi kara ee ku dhex jira biyaha.
Unugyada yaryar ee xad-dhaafka ah waxay cunaan oo yareeyaan ogsijiinta, taasoo keenta dhimashada noolaha hawada waxayna soo saaraan sunta waxyeelada leh sida ammonia iyo baaruud.
Sunta cayayaanka lagu dilo iyo kiimikooyinka ciidda la xidhiidha waxaa daadiya biyaha roobka oo ku dhex milma ciidda, sidaas darteedna wasakheeyaan biyaha dhulka hoostiisa ku jira.
Waddamada soo koraya, dadku waxay si toos ah uga cabbaan biyaha aan la daweyn ee webiyada, togagga, ama ilo kale. Mararka qaarkood waxaa jiri doona wasakh dabiici ah oo ay sababaan noolaha sida fayrasyada, bakteeriyada iyo protozoa.
Waxay u badan tahay in wasakheyntan dabiiciga ah sababa cuduro halis ah oo biniaadmi ah iyo dhimashada kalluunka iyo noocyada kale.
Wasakhaynta walax la hakiyay
Dhammaan kiimikooyinka si fudud uguma milmi karaan biyaha. Kuwaas waxaa loo yaqaan "particulate matter." Noocyada noocaan ah waxay dhaawici karaan ama xitaa dili karaan noolaha biyaha.
Waxaa caan ah in la arko sida warshado kala duwan ay u isticmaalaan kiimikooyinka si toos ah loogu daadiyo ilaha biyaha. Agrochemicals loo isticmaalo si xad dhaaf ah beeraha si loo xakameeyo cayayaanka iyo cudurada ayaa ugu dambeyntii ku qulquli doona webiyada, sumayn doona noolaha biyaha, daminta kala duwanaanshaha noolaha iyo khatar gelinaya nolosha aadanaha.
Marar badan waxaan niraahnaa biyuhu waxay leeyihiin nafaqo caafimaad leh oo noolaha, sidaas darteed muhiim ma aha in la nadiifiyo. Laakiin helitaanka bacriminta beeraha iyo warshadaha badan ee biyaha la cabbo ayaa beddeshay xaaladda oo dhan.
Bulaacadaha, bacriminta iyo bulaacada badan ayaa ka kooban xaddi badan oo nafaqo ah oo kicin kara koritaanka algae iyo haramaha biyaha, ka dhigaya mid aan la cabbi karin oo xitaa xidhid shaandhada.
Biyo-baxa bacriminta ee ka soo baxa dhul-beereedku waxa ay wasakheeyaan biyaha webiyada, togagga, iyo harooyinka ilaa ay ka gaaraan badda. Bacrimiyeyaasha ayaa qani ku ah nafaqooyinka kala duwan ee lagama maarmaanka u ah nolosha dhirta, iyo biyaha cusub ee la soo saaro waxay beddelaan dheelitirka dabiiciga ah ee nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah dhirta biyaha.
Ilaha iyo noocyada wasakhowga biyaha
Ilaha wasakhowga anthropic ee saameeya tayada biyaha waxaa badanaa loo qaybiyaa laba nooc:
Ilaha wasakhaysan ee aan dhibicda lahayn
Aan aragno mid kasta oo iyaga ka mid ah:
Ilaha faddaraynta: Isha wasakhaysan waxaa loola jeedaa isha wasakhowga ah ee sii daaya wasakh keli ah ama gooni ah oo ku taal meel go'doonsan ama xaddidan. Sida loo noqdo: dareeraha biyaha wasakhda ah ee gudaha, dareeraha biyaha wasakhda warshadaha, hawlaha wasakhda khatarta ah, dheecaanka miinada, daadinta, dareeraha shilalka, iwm.
Ilaha wasakhaysan ee wasakhaysan: Waxay yihiin ilaha fidinta, oo ay ku jiraan waxqabadyo daboolaya meelo waaweyn oo keeni kara wasakh dhulka hoostiisa ah, oo hubaal aan si dhab ah iyo sax ah loo qeexi karin. Tusaalooyinka ilaha-ku-salaysan qaarkood: beeraha iyo xoolaha, biyo-mareenka magaalooyinka, isticmaalka dhulka, qashin-qubka, meel-dhigista jawiga, iyo hawlaha madadaalada.
Ilaha dabiiciga ah ee wasakhowga: Waxay tixraacayaan dabka ama dhaqdhaqaaqa volcano.
Ilaha wasakhowga tignoolajiyada: Noocan ah isha wasakhaysan waxay ku salaysan tahay isticmaalka warshadaha iyo gudaha, oo ay ku jiraan gaadiidka matoorada ah ee u baahan saliidaha.
Wasakhowga noocaan ah waxaa soo saara microorganisms, sida bakteeriyada, fayrasyada, protozoa Waxay u horseedi kartaa cudurro halis ah sida daacuunka, tiifowga, iyo cagaarshow.
Qashinka dabiiciga ah
Asalkiisu waa qashinka ka dhasha hawlaha bani'aadamka, sida xoolaha. Joogitaanka walxaha noolaha ama si fudud u jajaban ee biyaha ku jira waxay kor u qaadaan koritaanka bakteeriyada aerobic ee cunta ogsijiinta jirta. Hypoxia waxay ku adkeynaysaa noolaha hawada si ay u noolaadaan, noolaha anaerobic-ka ayaa sii daaya walxaha sunta ah sida ammonia ama baaruud.
Kiimikooyinka aan organic ahayn
Waxa la mid ah asiidhka, cusbada, iyo biraha sunta ah. Xaddiga sarreeya, waxay u keeni karaan dhaawac halis ah noolaha, hoos u dhaca wax soo saarka beeraha iyo daxalka qalabka shaqada.
Nafaqeeyayaalka aan organic ahayn
Waxa la mid ah Nitrates iyo phosphates. Waa walxaha milmi kara lagama maarmaanka ah horumarinta dhirta oo kicin kara koritaanka algae iyo noolaha kale. Wasakhowga noocaan ah wuxuu u horseedi karaa eutrophication meydadka biyaha, oo u baahan isticmaalka dhammaan ogsijiinta hadda jirta. Tani waxay caqabad ku tahay dhaqdhaqaaqyada noolaha kale waxayna yaraynaysaa kala duwanaanshaha noolaha ee biyaha.
Iskudhisyada dabiiciga ah
Sida saliidda, shidaalka, caagagga, sunta cayayaanka, iwm. Waa maaddooyin lagu hayn karo biyaha muddo dheer oo ay ku adag tahay in noolaha yaryari uu burburo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto noocyada wasakhowga biyaha ee jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Noocyada wasakhowga biyaha